Ama-Ellicott Dredges Anenkontileka Ye-Dual Wheel Excavator Dredge e-Australia
Abanini - iTiWest Joint Venture, Australia, ne50% ephethwe yiKerr McGee Corporation, e-USA
Usayizi we-Hull - ubude ngezinyawo 195 '
Ubunzulu Obukhulu Bokumba 82 '
Ukudonsa Usayizi Wepayipi - ID 24 "
I-Dredge Pump Horsepower 2000
Isisulu sehhashi 900
Ingqikithi efakiwe I-Horsepower 4100
UKWAZISWA KWEPROJEKTHI: Ngemuva kohambo olunzulu lwabakhiqizi bamadolobha omhlaba wonke kanye nemishini ekhona ye-dredge, iCooljarloo Joint Venture inikeze u-Ellicott iphrojekthi ye-turnkey ukuklama nokwakha i-dredge yabo, "COOLJARLOO I", yezimayini ezisindayo zamaminerali eNtshonalanga Australia. I-double wheel excavator dredge, eyaqala ukusebenza ngoDisemba 1989, yachazwa njengendawo enkulu kunazo zonke emhlabeni yezimbiwa zesihlabathi samaminerali kanye ne-dredge enkulu kunazo zonke e-Australia.
Isinqumo besisuselwa entengweni nasekulethweni. U-Ellicott ukhombise ukuthi unomkhiqizo omuhle kakhulu, intengo ephansi kakhulu, kanye nokulethwa kwezinyanga eziyi-11. Empeleni, i-dredge yaqedwa esikhathini esingaphansi kwezinyanga eziyishumi nanye kusukela ekuqaleni kwephrojekthi, "isikhathi sokurekhoda sephrojekthi yalolu sayizi nobunzima", ngokusho kozakwethu ohlanganyelwe uMinproc.
Ukulethwa kokuqala kwe- “COOLJARLOO I ” yenziwa yenzeka ngefilosofi ka-Ellicott yokuphathwa kwephrojekthi "umthwalo owodwa". Ukwakhiwa nokwakhiwa kwemishini yedredge kwaqedwa e-United States, umsebenzi wensimbi owakhiwe eSingapore, kanye nemishini ezisebenzelayo eNetherlands. Zonke izingxenye zathunyelwa e-Australia emhlanganweni wenkundla kule ndawo.
The "COOLJARLOO I" ine-excavator yamasondo amabili eqhutshwa ngogesi. I-dredge yonke ingugesi kagesi we-DC ngaphandle kwama-spuds aphathwa amasilinda we-hydraulic. Isifukuzi samasondo amabili anelungelo lobunikazi esingu-900 HP sinobubanzi obungu-160 and kanye nesisindo esilinganiselwe samathani emethrikhi ayi-100. Lo mshini wesondo ojikelezayo oqhutshwa ngogesi unemiphini esekelwayo enezinsimbi, izindlu zezinsimbi ezenziwe ngamatshe nokwamukela i-hopper, ipayipi lokudonsa, kanye nezinsizakalo zokwakheka kokunamathisela imodyuli esiteji sokwehla.
Ukwembiwa okujulile okujulile kwe-TIO2 yezimbiwa ngokugcizelela ekusebenzeni kahle kwe-dredging kufaka i-Ellicott ekhethekile® umgubhi wamabhakede kanye nezinhlelo zokuthwala i-spud. Kukalwe umthamo wepampu yokuqamba @ amathani we-2600 ngehora.